Warshad Udugga Guriga - Soo-saareyaasha Udgoonada Guriga ee Shiinaha, Shirkado Alaab-qeybiyeyaal ah
• Qalabka Reed Diffuser Dabiiciga ah: 3 ur ayaa la dooran karaa: Rose, Jasmine, orchid, dhalada dhalada ah iyo sanduuqa hadiyadaha. Reed ulo waxay ku faaftaa saliidaha lagama maarmaanka ah iyo saliidaha udgoon tayo sare leh adoo adeegsanaya ulaha cawsduur. Olol looma baahna oo ammaan ah in la isticmaalo. Nadiifinta hawada udgoon ee quruxda badan ee qolka fadhiga, musqusha, jikada, qolka jiifka ama qolka cuntada. Ku hogaaminta nolol wanaagsan. • Udgoon Dabiici ah & Maaddooyin Amaan ah: Waxaan kuu balanqaadeynaa inaan la qabsan doonno qalabka tayada sare leh, udgoonka ubaxa macaan wuxuu ku siinayaa dareen dabiici ah, dabiici ah ...
Dabiiciga Reed Diffuser Set, Udugga Guriga & Nadiifi Hawada, Qolka Freshener
• Dabiiciga Reed Diffuser Set: 2 urka waa la dooran karaa: Badweynta iyo Liinta, dhalada dhalada ah iyo sanduuqa hadiyadaha. Reed ulo waxay ku faaftaa saliidaha lagama maarmaanka ah iyo saliidaha udgoon tayo sare leh adoo adeegsanaya ulaha cawsduur. Olol looma baahna oo ammaan ah in la isticmaalo. Nadiifinta hawada udgoon ee quruxda badan ee qolka fadhiga, musqusha, jikada, qolka jiifka ama qolka cuntada. Ku hogaaminta nolol wanaagsan. • Udgoonka Dabiiciga ah & Qalabka Amaanada ah: Waxaan balan qaadeynaa inaan la qabsano qalabka tayada sare leh, udgoonka ubaxa macaan wuxuu ku siinayaa dareen dabiici ah, jiir dabiici ah ...
Meelo udgoon oo udgoon oo loogu talagalay Khaanadda iyo Armaajada, Boorsooyinka Kirismaska ​​ee Muddada Dheer ee udgoon Udugga Guriga
Boorsooyinka kiishka udgoonku waxay ka samaysan yihiin vermiculite iyo saliid muhiim ah oo Faransiis ah taas oo gudbisay shahaadada MSDS. Kiishka udgoon ee guriga ee wanaagsan ayaa keena farxad iyo lama filaan, ku dheji hawo-qaboojiyaha hawo-qaboojiyaha carafyada boorsooyinka kiishka leh ee khaanadda iyo armaajo si loo abuuro ur soo dhaweyn leh. Afar udgoon oo muddo dheer ah oo aad adigu ka doorato ， Udgoon heer sare ah oo la cusboonaysiiyay, khaanadeena kiishka carafta leh ayaa leh saameyn muddo dheer socota. Waxay Leedahay Fikrad Hadiyad Wanaagsan: • Nooc kasta oo miro ah oo uraya sida miraha dhabta ah, cusub ee raaxada leh ...